Dowladda Itoobiya oo ka baxday heshiiskii Dekadda Berbera ee DPWorld - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Dowladda Itoobiya oo ka baxday heshiiskii Dekadda Berbera ee DPWorld
Warar lagu kalsoon yahay ayaa daaha ka rogay in Dawladda Itoobiya ay gabi ahaanba kalaabatay Saamigii 19%-ka ahaa ee ay ku lahayd Mashruuca maalgashi ee ay shirkadda Imaaraatiga ah ee Dp-World kula wareegtay Dekadda Magaaladda Berbera ee Somaliland.
Xogahan oo ay wadbaahintu ka heshay diblumaasiyiin ku sugan dalka iyo dabadiisa oo u dhuun-daloola arrimahan,ayaa tibaaxay in dawlada Itoobiya,ay gebi ahaan-ba ka noqotay saamigii 19% ah ee maalgashiga Marsadda,isla markaasna ay la baxday saamigaas ay ku lahayd maalgashiga Dekadda Berbera,waxaanay taas baddelkeeda ay door-biday inay iskugu lugga duwato dhankaa iyo Dekaddaha dalka Jabuuti ee ay hore u isticmaali jirtay iyo dekedo kale oo ay ka qorshaynayso Wadamada badaha ee Geeska kuyaala.
Geesta kalene xoga ayaa intaas ku daray inay Itoobiya joojisay wax-yaabihii ay kale soo degi jirtay Magaalada Berbera,iyadoo aan dhawrkii bilood ee ugu dambeeyey isticmaalin Dekadda Berbera,haseyaashee xoggohan ayaan si rasmi ah u sheegin sababaha rasmiga ah ee ay Itoobiya uga noqotay saamigii ay ku lahayd maalgashiga marsada Berbera iyo sababaha ay u joojisay isticmaalkii Dekadda Berbera.
Dhinaca kale xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya Xukuumadda Abiy iyo Dawladda Soomaaliya ayaa sii xoogaysanaya waxaana si weyn loo aanaynayaa in gaabis ay Itoobiya ku samaysay Xiriirkii Somaliland ay lahayd inuu yahay mid ay ku raaligalinayso Dawladda Farmaajo oo cadaadis diplomaasiyadeed ku haysa Somaliland.
Deni oo dalbaday in Ciidanka Xoogga Dalka laga saaro Gobolka Gedo
RW Rooble oo ku wajahan Garowe
Taliyaha cusub ee qeybta 21aad oo la kulmay Ciidamada ku jira xeradaasi,Sawirro